साझा बन्दै माघी- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
साझा बन्दै माघी
तराईको माघी पहाडमा माघे संक्रान्तिका रुपमा मनाइन्छ । थारु समुदाय आफ्नो नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न फुसका अन्तिम तीन दिनदेखि नै तम्तयार बसेको छ । रुरु क्षेत्रमा अघिल्लै दिन महोत्सव सुर भइसकेको छ ।
माघ १, २०७६ प्रदेश ब्युरो
(बुटवल) — प्रदेश ५ मा माघी साझा पर्वका रूपमा मनाइँदै छ । यति बेला यहाँका तराईदेखि पहाडसम्म माघे संक्रान्तिको रौनक छ । शक्तिपीठमा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्न थालेको छ । पश्चिम तराईमा बसोबास रहेका थारु समुदायले नयाँ वर्ष उल्लासपूर्वक मनाइरहेका छन् ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा मन्दिरमा परम्परादेखि थारु समुदायका महन्तबाट पूजाआजा गरिन्छ । वर्षौंदेखि यहाँ बालिएको धुनी कहिल्यै निभाइँदैन । मन्दिर कहिले स्थापना भएको हो, कतै अभिलेख छैन । मन्दिर करिब चार सय वर्ष पुरानो मानिन्छ ।
‘खरानी टीकाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले पुर्खादेखि धुनी निरन्तर बाल्ने गरिएको छ,’ पुजारी राम अवतारले भने, ‘धुनी नबाले अशुभ हुन्छ ।’ माघे संक्रान्तिदेखि तीन दिन श्रद्धालुले धुनी ताप्ने परम्परा छ । भगवान्को घर पुग्ने बाटो भएकाले यसलाई ठाकुरद्वारा (भगवान्को द्वार) भनिएको स्थानीय जग्गदम्बा उच्च माविका पूर्वप्रधानाध्यापक दिनेशचन्द्र गौतमले बताए । मेला सुरक्षाका लागि बर्दिया र नेपालगन्जबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । चार दिन सञ्चालन हुने मेलाका लागि पर्याप्त सुरक्षा, स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
दाङ, बाँके र बर्दियाका थारु गाउँमा माघीको रौनक छ । नाचगान र खानपानको तयारी छ । थारु समुदायका लागि यो नयाँ वर्ष पनि हो । उनीहरू पुसका अन्तिम तीन दिन र माघका दुई दिन गरी पाँच दिन माघी मनाउँछन् । पहिलो दिन माछा मार्ने, दोस्रो दिन खसी, सुंगुर, कुखुरा मार्ने र तेस्रो दिन तरुल, सक्खरखण्ड खन्ने गरिन्छ । माघ १ अर्थात् माघीको दिन नुहाउने, अग्रजसँग टीकाटाला गर्ने, नाचगान गर्ने र २ गते दिदीबहिनीको घरमा भिक्षा दिन जाने चलन छ । अन्तमा नाचेको पैसाबाट भोज गरेर माघी समापन गरिन्छ । माघीको दिन बिहानै उठेर नदीमा नुहाउन जाने, नुहाएर फर्केपछि चामल, दाल र नुन मिसाएको निसराउ छुने र त्यसपछि मान्यजनको घरमा गएर टीका लगाउने पुरानो चलन हो । बेलुकीपख थारु गाउँका अगुवा महतवाको घरमा सबै जना जाँड, रक्सी र तरकारी लिएर मान्न जान्छन् । महतवाको घरमा जम्मा भएको खानेकुरा सबै मिलेर खाने र नयाँ महतवा चयनको छलफल गर्ने चलन रहेको महतवा संघका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । ‘नयाँ वर्षका लागि महतवा छान्ने र नयाँ योजना बनाउने काम सम्पन्न गरिन्छ,’ उनले भने ।
माघीको भोलिपल्ट बिहानै निसराउमा थप खानेकुरा राखेर दिदी–बहिनीलाई मान्न जाने चलन हुन्छ । त्यसपछि माघीको रात नाचेर जम्मा भएको दक्षिणाबाट सामूहिक रूपमा भोज गरिन्छ, जसलाई नच्नौरी भनिन्छ । माघीको गीत र नाचमा विभिन्न भाव व्यक्त गरिन्छ । गीतमा अग्रजबाट आशीर्वाद लिने भाव हुन्छ । महतवा, रैती, कमैया, कमलरीजस्ता कामकाजी व्यथाका गीत पनि गाइन्छन् । कुनै समय माघीमै छान्ने गरिन्थ्यो । कमैयाहरूको नवीकरण हुन्थ्यो । अहिले कमैया प्रथा हटिसकेको छ । कमलरी मुक्त भएपछि धेरै चेलीले प्रगति गरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । ‘माघी अहिले साँच्चिकै रमाइलोको पर्व भएको छ । पहिले दु:खको पर्व थियो,’ उनले भनिन्, ‘माघीकै दिन अर्काको घरमा काम गर्न जाने निधो हुन्थ्यो । अहिले माघी मुक्तिको पर्व भएको छ ।’
पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको संगम रिडीमा मंगलबार रूरू महोत्सव तथा मकर संक्रान्ति मेला सुरु भएको छ । रूरू क्षेत्र गाउँपालिका–१ रिडी खेलमैदानमा गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ रिडी शाखा र रूरू फ्रेन्ड्स क्लबले संयुक्त रुपमा मेला आयोजना गरेका हुन् । पाल्पा र स्याङ्जातर्फको बगरमा भने अलग्गै मेला लाग्छ । पाल्पातर्फको ऋषिकेशव मन्दिरमा माघे संक्रान्तिको दिनदेखि भीड सुरु हुन्छ । स्याङ्जाको बगरमा पनि मेला लाग्छ । रूरू महोत्सव माघ ९ गतेसम्म चल्ने आयोजक गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ रिडी शाखाले जनाएको छ ।
रूरू क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय प्रचारप्रसारसँगै भ्रमण वर्षलाई सघाउन महोत्सव आयोजना गरिएको रिडी शाखा अध्यक्ष सुवर्णलाल कक्षपतिले बताए । ऋषिकेशव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गादत्त रेग्मीका अनुसार संक्रान्तिको केही दिनअघिदेखि नै चहलपहल बढेको छ । मेलामा व्यापारिक स्टलसमेत राखिएको छ ।
बिहान ४ बजे नै उठेर अविवाहित चेली–बेटीलाई पूजेपछि पूर्वी रुकुममा माघे संक्रान्ति पर्व सुरु भएको मानिन्छ । विशेष गरी दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई पूज्ने, लत्ताकपडा तथा उपहार दिने गर्छन् । घरगाउँका चेलीबेटीलाई पुजेपछि उनीहरू अरू सामूहिक कार्यक्रममा सरिक हुन्छन् । जिल्लाका पुथाउत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिकाको मगर बस्तीमा यसै गरी माघे संक्रान्ति मनाइन्छ । पुस मसान्तका दिन राँगा तथा खसी–बोका काटिन्छ, सक्खरखण्ड तथा अरु कन्दमूल पकाएर राखिन्छ । माघ १ गते बिहानै चेलीबेटी पुजिन्छ ।
पुथाउत्तरगंगाका १४ वटै र भूमे गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा माघे संक्रान्ति मनाउने चलन छ । पुथाउत्तरगंगाका केही वडामा तिहारको सट्टा माघे संक्रान्तिका दिन चेली–बेटीलाई पूज्ने र सम्मान गर्ने गरिन्छ । यो पुरानै चलन भएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१, मैकोटका विष्णु पुन मगरले बताए । चेलीबेटी पुजिसकेपछि गाउँमा तीर हान्ने प्रतियोगिता सुरु हुन्छ । प्रतियोगिताका लागि स्थानीय युवाले एक महिनाअघिदेखि नै सहयोग संकलन गरेका हुन्छन् । तीर हान्नु भनेको मगर खाम भाषामा ‘अस्तासिन्या’ हो । माघको पहिलो दिनदेखि सुरु हुने अस्तासिन्या सात दिनसम्म चल्छ । दुस्मनलाई पराजित गरेको खुसीयालीमा परापूर्वकालदेखि नै तारो हान्न थालिएको मानिन्छ ।
कमल पन्थी (बर्दिया), दुर्गालाल केसी (दाङ), हरि गौतम (रुकुम पूर्व) र माधव अर्याल (पाल्पा)
प्रकाशित : माघ १, २०७६ १०:०६
रैथाने बाली लगाउनै छाडे
गरिबले मात्र कोदो, जौ र मकैबाट बनेका परिकार खान्छन् भन्ने मानसिकताले असर
माघ १, २०७६ वसन्तप्रताप सिंह, तृप्ति शाही
बझाङ, बैतडी — बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–१० तीरखडेनीकी दीपा बुडालको परिवारले ७/८ वर्ष अघिसम्म कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका थिए । हिउँदयाममा अधिकांश जमिनमा जौ अनि गहुँ बालीको खेती गर्थे । उनको परिवारलाई आवश्यक पर्ने वर्षभरिको खाद्यान्नमा आधाभन्दा बढी हिस्सा यिनैले धान्थे । बजारबाट खाद्यान्न किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले पहिलाको जस्तो छैन ।
‘सबैले भात नै खोज्छन् । कोदो, जौ र मकैको खेती छोडिसक्यौं,’ उनले भनिन् । आजभोलि बजारबाट चामल किनेर खाने गरेको उनले बताइन् ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशका रमेश बिस्टले ७/८ वर्षअघि बर्सेनि १० क्विन्टलसम्म जौ फलाउँथे । उपभोग गरेर बचेको बिक्री गर्दा २०/२५ हजार आम्दानी पनि हुन्थ्यो । तर आजकल मुस्किलले उनको बारीमा जौ खेती हुन्छ । ‘पहिले जौकै रोटी खाने चलन थियो,’ बिस्टले भने, ‘तराईबाट चामल आउन थालेपछि सबैले जौ खान छोडे, खेती गर्न पनि छोडे ।’ उनले गाईभैंसीलाई खोले पकाउनका लागि मात्र जौको खेती गरिरहेको बताए ।
जौ मात्र होइन, उनको गाउँमा अधिकांशले पहिलेदेखि खेती गर्दै आएको फापर, उवा र कागुनो जस्ता रैथाने बालीको खेती गर्न छाडिसकेका छन् । खाद्य संस्थानको चामल जिल्लामा भित्रिनुभन्दा पहिला जिल्लाको दोस्रो मुख्य बालीको रुपमा रहेको कोदोको खेती गर्नेहरू पनि पछिल्लो समय बझाङमा निकै घटिसकेका छन् ।
स्थानीयहरूले हेला गरेका कारण बझाङ र बैतडीमा मात्र हैन, सुदूरपश्चिमका पहाडहरूमा रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘पहिले सदरमुकाम खलंगा नजिकैका गाउँमा पनि कोदो, मकै, जौ जस्ता बालीहरू प्रसस्त लगाइन्थ्यो,’ बैतडी सदरमुकामका उद्धवसिंह मारकण्डले भने, ‘अहिले देखिनै छोड्यो । यस्तै हो भने हाम्रो छोरानातिको पुस्ताले त कोदो, जौ भन्ने बाली नै चिन्दैनन् होला ।’ गरिबले मात्र कोदो, जौ र मकैबाट बनेका परिकार खान्छन् भन्ने परम्परागत मानसिकता भएकोले पनि स्थानीय बालीहरू धेरैले लगाउन छोडेको उनको बुझाइ छ । अहिले पनि बजारको पहुँचबाट टाढा रहेका र चामल किन्न नसक्ने विकटका स्थानीयले मात्र रैथाले बाली लगाएर त्यसबाट बनेका परिकार खाने गरेको उनले बताए । बैतडीमा ३ वर्ष अघिसम्म ५ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिने कोदो खेती अहिले घटेर ३ सय हेक्टरभन्दा कममा सीमित भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ ।
यस्तै बैतडीमा मकै उत्पादन हुने क्षेत्र पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ । अहिले १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र मकै लगाउने गरिएको छ । २/३ वर्ष अघिसम्म बैतडीमा १६ हजार ५ सय हेक्टरमा मकै खेती गरिन्थ्यो । गहुँ लगाउने क्षेत्रफल पनि घटेको छ । ३ वर्ष अघिसम्म २० हजार ९ सय हेक्टरमा फल्ने गहुँ अहिले १७ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र फल्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए ।
बझाङको अवस्था पनि उस्तै छ । चार वर्ष पहिला झण्डै २ हजार हेक्टरमा गरिने जौ खेती अहिले ६ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । यो पनि घट्दो क्रममा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख दीलबहादुर सिंहको भनाइ छ । ‘फापर, कागुनो जस्ता बालीहरूको खेती गर्ने चलन त करिब लोप हुन लागिसकेको छ,’ उनले भने ।
बझाङमा जौ, उवा, कोदो, फापर, चिनो, कागुनोको लागि प्रख्यात मानिने जिल्लाका उत्तरी भेगका सुर्मा, दौलिचौर, काँडा, दहबगर, रिलु, मष्टा, दाँतोला, मेलविसौना, गडराय, दंगाजीलगायतका गाउँमा पनि परम्परागत बालीको खेती गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ । कुनै बेला यहाँको खाद्य सुरक्षामा राम्रै योगदान पुर्‍याएका झुमरो, जुनेलो, मारस्या, तेगुनोलगायतका बालीहरू पनि करिब करिब हराइसकेको स्थानीयको भनाई छ । मालुमेलाका ८४ वर्षीय परमानन्द जोशी भन्छन, ‘यस्ता बालीको खेतीपाती त अचेल कसले गर्छ र ? । सायद धेरैले नामैसमेत बिर्सिसकेका होलान् ।’
रैथाने बालीलाई स्थानीयले हेला गरे पनि यसको पौष्टिक महत्व भने आयातित खाद्यान्नको भन्दा निकै बढी हुने जानकारहरू बताउँछन् । भातभन्दा कोदो, जौ, मकै, गहुँबाट बनेका परिकारले शरीरलाई फाईदा गर्ने बैतडीको शर्माली स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कृष्णा चौधरीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई पनि यिनकै परिकारबाट बनेका खानेकुरा खुवाउँदा हृष्टपुष्ट हुन्छन् । कुपोषित हुनबाट पनि जोगिन्छन् ।’
रैथाने बालीहरू विभिन्न कारणले लोप हुँदै जान थाले पनि यस्ता बालीको महत्वको तुलना आयातित बालीसँग गर्न नमिल्ने कृषि प्राविधिक रामलाल जोशीको भनाइ छ । ‘औषधीय गुणसमेत भएका रैथाले बालीहरूको पौष्टिक महत्व त छँदै छ,’ उनले भने ‘परिर्वतन हुँदै गएको जलवायुमा अनुकूलन हुनसक्ने क्षमता पनि उन्नत जातको बालीभन्दा निकै नै बढी हुन्छ ।’ पछिल्लो समय हाइब्रिड बीउको प्रचलन बढ्दै गएकोले रैथाने बालीको बीउ संरक्षणमासमेत ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘उन्नत र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सबैले सक्दैनन्, तर रैथाने बालीको बीउ सामान्य किसानले पनि सजिलै उत्पादन गर्न सक्छ,’ उनले भने । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारी क्षेत्र पनि उदासीन देखिएको जिल्ला कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष रामप्रशाद जोशीको भनाइ छ ।
‘अन्य बालीमा जस्तो अनुदान छैन, अनुसन्धान छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बेवास्ता गरेकाले पनि रैथाने बाली छिटो लोप हुन थालेका हुन् ।’ उनले तत्कालै विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन नगरिएमा बीउसमेत लोप हुने बताए । बीउको अर्थराजनीतिक रणनीति बेलैमा बुझ्न नसके देशले नै पछुताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : माघ १, २०७६ १०:०४
कार्यालयको छतमा स्तनपान !
सरकारले जनमतको कदर गरेन : कांग्रेस
तीन महिना भूमरीमा परें : महरा